ဆွဲဆောင်မှုရှိသူများ ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆွဲဆောင်မှုရှိသူများ ………
Posted by Khaing Khaing on Nov 23, 2012 in Creative Writing, Think Different | 78 comments
တစ်နေ့က ရုံးက အပျိုကြီးတွေကို ကျီစယ်ပြီး ပြောမိတဲ့စကားလေးကို ရွာထဲအပျော်သဘောနဲ့ တင်မိပါတယ် ………
အပျိုကြီးတွေက သူတို့အပျိုကြီးဖြစ်တာ အပူမရှာချင်လို့ …မယူချင်လို့ ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေကို အနိုင်ချေပတတ်ကြပါတယ် ……… ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ကိုယ်စဉ်းစားမိသလောက်နဲ့ သူတို့ကို ပြန်ချေပမိတာက အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့လို ခံယူမိတယ် ….မိန်းမတစ်ယောက်က ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ဖို့ စဉ်းစားတတ်ကြသလို …. စံတွေသတ်မှတ်ကြသလို ………. ယောက်ျားတစ်ယောက်ကလည်း မိမိချစ်သူမိန်းကလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲဖို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေထည့်စဉ်းစားတတ်ကြတယ် … ပညာတတ်မိန်းမကို လိုချင်တဲ့ အမျိုးသားက ပညာတတ်မိန်းမကို ချဉ်းကပ်ကြသလို … ချောလှတာကို မက်မောတဲ့ အမျိုးသားတွေက မိန်းမချောတွေကို ချဉ်းကပ်တတ်ကြတယ် …. အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့ အမျိုးသားတွေက ချမ်းသာတဲ့မိန်းမကို ချဉ်းကပ်ပြီး …. အပြောချိုတဲ့မိန်းမ…. ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ မိန်းမ ….. အိမ်ထောင်တာဝန်ကျေပွန်နိုင်မယ့် မိန်းမ …… ဦးဆောင်နိုင်မယ့်မိန်းမ … နာခံတတ်တဲ့မိန်းမ …. ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိပေမယ့် ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီး လက်ထပ်ချင်တဲ့မိန်းမ …. ထိုကဲ့သို့သော အမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးကို ချဉ်းကပ်ပြီး မိမိနဲ့ စိတ်နေသဘောထား အတန်အသင့်တိုက်ဆိုင်မယ့် အမျိုးသမီးကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ် …….. အဲဒီလိုရွေးချယ်လက်ထပ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အရည်အချင်း ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ ရွေးချယ်ခံရတယ်လို့ ကျွန်မရဲ့ တဘက်သတ်အမြင်နဲ့ ပြောတော့ အပျိုကြီးတွေ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေပါတယ် ….
သမီးရည်စားဖြစ်လို့ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး သေချာပေါက်လက်ထပ်ဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး … ကိုယ်က ကောင်လေးကိုသိပ်ချစ်လို့ ယူချင်လက်ထပ်ချင်သည်ပဲထားပါ သူယူမှဖြစ်မှာလေ …… ကောင်လေးကမယူချင်ပဲ မိန်းကလေးဘက်က ဘယ်လိုမှ အတင်းအကျပ် စီစဉ်လို့မရဘူးလို့ထင်ပါတယ် ……. ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ့်ချစ်သူ လက်ခံနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေပြည့်ဝ ဆွဲဆောင်မှုရှိမှသာ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ……..
ဒါကို အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားတွေက ဆွေးနွေးအကြံပေးရင် ကျွန်မရဲ့အဆိုက မှန်မမှန် အတည်ပြုလို့ရမှာပါ …………
မည်သည့် အပျိုကြီးကိုမျှထိခိုက်တင်ပြတာမဟုတ်ပါ …. ကျွန်မရဲ့ရုံးမှ အပျိုကြီးများနှင့် အခြေတင် ပြောမိတာလေးကို ဝေမျှ အကြံဥာဏ်တောင်းခြင်းသက်သက်သာ အပျော်သက်သက်သာဖြစ်ပါသည် …………..
ဒါဆို ဘဲဥက ဆွဲစောက်မှုမချိလို့ပေ့ါနော် …… ခစ်ခစ်ခစ်
မတင့်နှင့် ကိုရန်လေးတို့ကို နမူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
သူတို့တွေက ချွင်းချက်ပေ့ါနော် … ကိုချိုကြီး ……..
ဟိဟိ။ ခိုင်ခိုင်ရေ မှတ်သားလောက်ပါတယ်ဗျာ။ :harr: :harr:
ဟဲ့ … ဘာဖစ်ပြန်တာတုန်း ….. အလကားနေချဉ်နေတာ ……. ဆေးလိပ်သောက်လိုက် ………
အပျိုကြီးဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ဖြစ် ရောက်တဲ့ဘ၀မှာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်သူသာ
အောင်မြင်သူဖြစ်ကြောင်း အရာတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာမရှိသလို အကောင်း
အဆိုးဒွန်တွဲနေမည်သာဖြစ်ကြောင်း ဘဲဥလဗြိုကြီးဖြစ် ကြိုက်မယ့်ဒူမရှိသည်မှာလဲ
မှန်ပါ၏ … မမcezer လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာကို ကျေနပ်အောင် ပျော်ရွှင်အောင် နေနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ …..
အပျိုတွေကလည်း အိမ်ထောင်သည်တွေကို ကြည့်ပြီး အားငယ်တတ်ကျ အားကျတတ်ကျသလို …
အိမ်ထောင်သည်တွေကလည်း အပူအပင်ကင်းတဲ့ အပျိုတွေရဲ့ဘ၀ကို အားကျတတ်ကျပါတယ် ……
သူများတော့ မသိဘူး ကိုယ်တိုင်ကတော့ ယူမဲ့သူမရှိလို့ အပိုကြီးဖြစ်နေတာပါ
လူမပြောနဲ့ ခွေးတောင် လှမ်းမဟောင်တဲ့ ဘ၀ပါ ဟီး
အဲ့ ဘဝက ပျော်စရာကြီးပါ အပုလေးရယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပေါ့။
@ Ma Poochအယ် … အမပု အားငယ်တွားလား သူများပြောလို့ …….အားမငယ်ပါနဲ့နော် ….. ခွေးမဟောင်ဘူးဆိုတာက ကိုယ်က သူတို့မျက်စေ့နောက်အောင်မလုပ်လို့ မဟောင်တာနေမှာပါ ……..
@မမခိုင်ဇရာ … မမခိုင်ဇာ ….. ဟီးနောက်တာ … မမရော အပိုကြီးပဲလားဟင် ……..
အပိုကြီးတော့ ဟုတ်ပါဘူး ခိုင်ခိုင်။ သူ့နေရာနဲ့ သူ သုံးလို့ရမယ်နဲ့ တူပါရဲ့။ :harr: :harr: :harr:
ဒီ ပို့(စ) လေးကို ချစ်တယ်တော့။
မမခိုင်ဇာကလဲ …… သူများက တဖက်လှည့်နဲ့ အပျိုကြီးတွေကို စစ်တမ်းကောက်နေတာ … ဒီပို့စ်ကိုကြည့်ပြီး လူပိုလေးတွေက ရွာထဲက အပိုမလေးတွေကို ချဉ်းကပ်ရအောင် လုပ်နေတာပါ ……. မမခိုင်ဇာကို အပိုလေးလို့ထင်နေတာ တမီးက ………
အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါဒယ်။ :harr:
ဟဲ ဟဲ … ဒါဆို Second ချွေးမလေးက ဆွဲဆောင်မှု ရှိတော့မယ်နဲ့တူဒယ် …….
ဟတ်ကဲ့ မာမီခိုင်ရဲ့သားသားလေးကို ကျောက်ပျဉ်ရွက်ပီး
တမီးဂဒေါ့လေ.. လက်တွဲဘရဇေလို့ ကမ်းလှမ်းဒဲ့လူဒွေများလို့ မရွေးချင်ဒေါ့လို့ဂို အပိုဂျီးလုပ်မရားလို့…အခိ..အခိ…ဟိဟိ…
ယောင်းမလေးနော် … ခေါ်တော့ မမဂျီးကို ယောင်းမတဲ့ ဘာအပိုချီးလုပ်မှာလဲ … မရဘူးလာခဲ့ …….. မမကိုယ်တိုင် ကားတင်ခေါ်မယ် ……. ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသတည်း
ဒါဆို လမ်းထိပ်က ကလေးနို့တိုက်ရင်းအကြော်ကြော်နေတဲ့
မှန်၏ … မှန်၏ …. သူလည်း တစ်ချိန်က သူ့ချစ်သူအပေါ်ဆွဲဆောင်မှု ရှိခဲ့တာပေ့ါလေ …….
မိုးzကလေးပျောက်နေတယ် …. သတိရနေတာ ဟိုနေ့ကပဲ ………
မိုးစက်လား ဘယ်သူ့ကိုဘယ်လို ဆွဲဆောင့် အဲ ဆွဲဆောင်ရမလဲလို့ လုံးပန်းနေရလို့ သတိရပေးတာ ဝမ်းသာပါတယ်ရှင့် ..
နေဦး ….. နေဦး
ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့ မယ် ……..
မခိုင်ခိုင် အတွက်ရော အပိုယူလာခဲ့ ရဦးမလားးးးးးးးးးးးး
ဦးဦးစာမိ ….. ဘာမှကြောက်နဲ့ အမှန်အတိုင်းသာ ၀န်ခံပြောပြလိုက် …….
တမီးအတွက် သံခမောက်မလိုဘူး … ဒူပေဒဏ်ပေခံပြီးသား ..
ဘယ်လို ညည်းညည်း မသနားပါဘူး ……
Sippin’ wine, killing’ time
When you says “how’s your life?”
I smile and said everything’s alright.
There will be some reasons not to leave
But for your sake, I have to leave.
I really know that I should not stay,
But I have no way to escape from your way.
OH.. darling, I wanna be by your side today.
I wamma makeamemory..
Yes,.. I wann makeamemory.
I am hiding all my tears and cry
Laughing for your sweetest smile
I hear nothing except your heart beat in time.
If you want me to stay or if you want me to go away,
But honey, I wanna be in your arms only for today.
Will you writeacouple lines for me?
And I will sing the song of love melody.
You gotta have some sweetest times for memory
I wanna make wine of strawberry.
နေ့လည်က Khaing Khaing ရဲ့ ပို့စ်လေးကိုဝင်ဖတ်ရင်း Inz@ghi တင်ထားတဲ့ကဗျာလေးကို သဘောကျမိသွားတယ်။ နောက်ပြီးတခြားတစ်ဖက်ကနေတွေးပြီး ပြန်ရေးချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလို့ စိတ်အလိုလိုက်ပြီးရေးဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒါ ကဗျာလေးရဲ့ ၄ ပိုဒ်မြောက်မှာ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာလေး လာပြင်တာပါ။
Yes,.. I wann makeamemory. အစား
I wanna makeamemory..
Yes,.. I wanna makeamemory. လို့ဖတ်ပေးကြပါနော်။
ဒီမယ် ယောက္ခမ ဒေါ်ဗိုက်ဖူးခိုင် ……. ညည်းက ပို့စ်ရေးသလိုနဲ့ ကျုပ်ကို ခွပ်တယ်ပေါ့လေ …. ။
၀ါကျွတ်မှာ အစွံမထုတ်နိုင်တဲ့ အပိုရီးဘ၀ကို လှောင်ရယ်ချင်တယ်ပေါ့ ။ စွဲဆောင်မှု မချိလို့ အပိုရီးဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးအေ့ … စွဲဆောင်မှု ချိတာမှ တဖက်ကမ်းတောင် လွန်နေသေး … အဟေးးးးးး အသံကြား နားခါးချင် ၊ ညက်နှာညင် ပိတ်ရိုက်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ စွဲဆောင်မှု ချိပါရဲ့တော် ။:mrgreen:
အပိုရီးဖြစ်ရချင်းရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အချက်တစ်ခု ပြောဗျရဦးမယ် ။
တစ်ယောက်ယောက်ကို ရွေးချယ်လိုက်လျှင် ၊ လွမ်းပြီး ကျန်ခဲ့ရမယ့် တခြား လူတွေကို စာနာမိလို့ အပိုရီး လုပ်နေတာအေ့ …. တိဘီယား
သြော် …… မှတ်သားလောက်ပါတယ်ခင်ဗျ
အားနာလို့…..တဲ့ 
ကျုပ်တို့ ယောက်ကျားတွေကတော့ယူရင်တစ်ယောက်
မယူသေးရင် ကြိုက်သလောက် …တဲ့ 
လက်နှေးမနေနဲ့  ကလေးမ
နောက်ကျရင် အပေါက်ဝကလှည့် ပြန်နေရမယ် လက်ဦးမှုရယူထား
ယီးတီးယားတားလုပ်နေရင် မေ့ ဆေးပေးပြီး ခေါ်သွားလိုက်
ဟဲ့ … ခွပ်ရအောင် ကျုပ်က ကြက်မလား ……. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အိုးမလုံအုံပွင့်ရင် ပွင့်တယ်ပေ့ါ … ကိုယ့်ရဲ့အထက်ရှင်နည်းရင်နည်းတယ်ပေ့ါ …. ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ၀န်ခံလိုက်စမ်းပါ ……..
အပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ နည်းအသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ မမတုံကို ဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့် မနက်ဖြန် (24.11.2012) နေ့ခင်းစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ပါမည် …
နာ့ယောက္ခမနှစ်ယောက်စလုံး …..ချွေးမကို မညှာမတာ ခြေထိုးခံကြတယ် .. ရက်စက်လိုက်ကြတာအေ …… ။
တယောက်ကလည်း မေ့ဆေးပေးပြီး ခေါ်သွားလိုက်တဲ့ …. ဂလိုဆို … ဂနေ့သူကျောင်းဆင်းတာ သွားစောင့်ရတော့မယ် … ခိခိ ..
တယောက်ကလည်း .. အလှူ့ လ္ဘက်နဲ့ … ဒုတ်ထိုးရောင်း … အဲ ….. မျက်နှာလုပ်တယ် .. သူ့ပွဲ လည်း ဟုတ်ပဲနဲ့ .. ဟွန့် :eee:
အော် .. ဖွဘုတ်မှာ တုန်းကတော့ ကျုပ်ကို မိန့်မိန့်ကြီးနဲ့ သတို့သားအမေလုပ်ခိုင်းပြီးမှ ခုဒေါ့ ငါးစိမ်းမြင်လို့ ငါးကင်ပစ်ချင်တာပေါ့လေ ……..
မရှိ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းလေးတွေနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ (မြောင်းဖောက်မှု အနုပညာ) ကိုလည်း တဖက်ကမ်းခက် မဟုတ်တောင် တီးမီးခေါက်မိရှိထားရင်ဖြင့် အပိုကြီး ကျမ တကိုယ်တည်းဘဝက အမြန်ကျွတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း.. ဒူ ဟူ ဟူ…
ဟီး ဟီး … မရှိ ရှိတာလေး ညှစ်သုံးတဲ့နည်းလေးပေါ့နော် ………
ဘာာာာ… မြောင်းဖောက်မှုမှာ အနုပညာရှိတယ်တဲ့လား…
မြောင်းတောင်မက၀ူး..ဆည်တောင် ဖောက်ချရင်ကောင်းမား..ကျံဇီဘူးဒယ်… ဒါမယ့်..ရေခဲတုံးဆိုတော့ မဖစ်နိုင်လို့… :harr:
ဘ၀ပေးကုသိုလ် ထင်ပါ့ ..
မညားသော်လည်း ချစ် … အဟစ်ဟစ်ဟစ်စ်စ်စ်စ်စ် :harr:
လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ ပြည့်ပါစေ … ကြိုးစားသူတိုင်း အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရောက်ပါစေ …..
ဆွဲဆောင်မှု့မရှိလို့ အပျိုကြီးဖြစ်ရတယ်တဲ့လား? မဟုတ်လောက်ဘူးနော်။ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှု့ အရည်အချင်း တွေရှိပြီးသားပါ။ အမှုအရာ အပြောအဆို နေမှု့ထိုင်မှု့ အလှအပ အပြောအဆို အသံသာယာမှု လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ယဉ်ကျေးမှု့ သိတတ်မှု့ ပေးယူမျှမှု့ စသည်ဖြင် စုံလင်လှပါတယ်။ ဘယ်အမျိုးသမီး ဘဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာပြီးကြည့်ပါ ဆွဲဆောင်မှု့အရည်အချင်းတော့ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု့ မရှိလို့ အပျိုကြီးဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ မဟုတ်နိုင်ဟုထင်ပါတယ်။
ထိုအမျိုးသမီးမှာရှိတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု့ကို သိရှိခွင့်ရသွားသူ သိရှိသွားသူ အမျိုးသားက အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်ပေါင်းသင်း သွားတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် မိဘမလွန်ဆန်နိုင်ရင်းအိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့သူတွေမှာ
တစ်ချို့အမျုိးသမီးများမှာတော့ မောင်လေး ညီမလေး တူလေး တူမလေးတွေကို ငဲ့ရင်းလုပ်ကျွေးရင်း
အပျိုကြီးဘ၀ရောက်နေသူတွေလဲ အများကြီး ။
ဆွဲဆောင်မူ့ရှိခြင်း= အိမ်ထောင်ကျခြင်းဆိုရင်တစ်ဝက်တော့မှန်ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လေးပေါက်နဲ့ ဦးဦးခရဲ့ကော်မန့်တွေကြောင့် အပျိုကြီးတွေတော့ အားတက်သွားလောက်ပါရဲ့ …..
တစ်ချို့ သမီးမြင်ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလိုချင်ကြတယ် … ဒါပေမယ့် သူတို့က ယောက်ျားတစ်ယောက် ချစ်အောင် နှစ်သက်အောင် မလုပ်နိုင်မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူး … သူတို့မှာ ငါဆိုတဲ့မာန်မာနတွေကို ဆွဲကိုင်ထားတတ်ကြတယ် … လိုချင်တာပဲသိပြီး ပေးဆပ်မှုကိုမသိကြဘူး … အဲလိုနဲ့ အချိန်တွေကြာလို အသက်တွေလည်းကြီးကုန်ရော … ခက်ရချည်ရဲ့ဖြစ်ကုန်ရောပေ့ါ ….
လေးပေါက်ပြောသလို အမျိုးသမီးတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ် … မိဘအတင်းပေးစားပြီးယူတဲ့ အမျိုးသမီး တွေလည်း သူတို့အိမ်ထောင်ရေးသာယာဖို့တော့ ဆွဲဆောင်ရတာပဲလေ … ဟီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကျတော့ သိပ်ပြီးဆွဲဆောင်ဖို့မလိုဘူး … ပေးစားတဲ့သူရှိနေတော့ …..
ဟီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကျတော့ သိပ်ပြီးဆွဲဆောင်ဖို့မလိုဘူး … ပေးစားတဲ့သူရှိနေတော့ …..
မယ်ခိုင် ညည်းကတော့ ညည်းဘာသာညည်းဆွဲဆောင်ပြီး ရထားတာဖြစ်မယ်အေ့
အိမ်ထောင်ရှင် အထီး အမများဖြစ်သွားကြပြီး
မရခြင်းမဟုတ် မယူခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားကျလေကုန် :harr:
မမနိုဗွီကိုတော့ တကယ်နှမြောတယ်ဗျာ … လှလည်းလှတယ် ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတယ် သဘောကောင်း မနောကောင်း အားလုံးပြည့်စုံနေရဲ့သားနဲ့ အပျိုကြီးလုပ်နေတာက တစ်ခြားလူတွေကို ဒုက္ခပေးနေသလိုပဲ …. ညီမသာ ယောက်ျားလေးဆို မမနိုဗွီကိုရအောင်ပိုးမှာ ….
စလုံးမှာရောက်နေတဲ့ အိမ်က ဒါလင်ကြီး ဒီစာကိုသာတွေ့သွားရင်တော့
မမနိုဗွီ တမီးက အပျိုကြီးလို့ထင်နေတာ …
တရားသဘောနဲ့ ဆင်ခြင်မိလို့မိဘ ညီကိုမောင်နှမတို့ ကိုလုပ်ကျွေးသမှုပြုချင်လို့ တမင် အပျိုကြီးလုပ်တာဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ် လေးလဲလေးစားပါတယ်..ပြောပြပါရစေ..
candle သူငယ်ချင်းအပျိုကြီးကတော့ ငယ်တုန်းကတော့ ထိုက်သင့်သလောက် ရုပ်ရည်လေးရှိပါရဲ့..
ချည်းကပ်လာတဲ့ ယောကျာ်းတိုင်းကို တန်တယ်မထင်လို့ ငြင်းခဲ့တာချည်းပါဘဲတဲ့..
ရှာရင်းနဲ့ ကြာသွားတာ..အင်း..့ လေးဆယ်လဲနီးလာပြီ..
အခုတော့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့ ပြီး လာကျူတဲ့ ကောင်လေးငယ်ငယ်လေးတွေတောင် အလွတ်မပေးချင်တော့ဘူး..
candle တို့ ရဲ့ မိသားစုလေးကိုကြည့်ပြီး အားကျမိတယ်တဲ့..
သူ့ အတွက်အမြဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့ ကိုယ်လဲမကယ်နိုင်..ခက်ပါရဲ့ ကွယ်…
ဟုတ်ပါတယ် မမကန်ဒယ် ….. ညီမရဲ့အပေါ်က ကော်မန့်တွေထဲကလို အပျိုတွေက အိမ်ထောင်ကျသူတွေကို အားကျ … အိမ်ထောင်သည်တွေက အပျိုတွေကို အားကျနဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးက ဒီလိုပါပဲ …
ညီမလည်း ဟိုတစ်လောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ် သူလည်း ကျောင်းမှာရော ကျောင်းပြီးတော့ရော ကြိုက်တဲ့သူတွေများခဲ့တယ် … ဒါပေမယ့် ရွေးလွန်းလိုချင်တာတွေများလွန်းပြီးတော့ အခုချိန်ထိ သူနဲ့တန်မယ့်ယောက်ျားကိုမတွေ့နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ……
ညီမကတော့ အိမ်ထောင်ကျတာကို နောင်တမရမိဘူး … ကိုယ့်အတွက် အဖော်ဆိုတာ တကယ်ကိုလိုအပ်တယ် … ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ စိတ်ညစ်တယ် … သံယောဇဉ်တွေတိုးလာလေ ကိုယ့်အတွက်ပူပင်သောကများရလေ အဲဒီတစ်ခုတော့ ပူပန်သောကရောက်နေရတယ် ……
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဆွဲဆောင်မှု ဆိုတာဟာ အများကြီးတော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
အိမ်ထောင်ကျတိုင်းလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ မဟုတ်သလို၊ ဆွဲဆောင်မှုတွေ
တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိပေမယ့် အိမ်ထောင်မကျတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသား နဲ့လား..ဦးနှောက်နဲ့လား..ဒါမှမဟုတ်..နှလုံးသားရော၊
ဦးနှောက်ရောနဲ့လား…နှလုံးသား တစ်ခုထဲနဲ့ဆိုရင်တော့ ခုန ဆွဲဆောင်မှုတွေ
(ဦးနှောက် သုံးရတဲ့ အတွက်အချက်၊စံတွေ ဆိုပါစို့)မလိုတော့ဘူးလေ…
‘ ချစ်တာတစ်ခုတည်း သိတယ်..ဘယ်ကစလဲ..ဘယ်မှာဆုံးမလဲ ‘ ဆိုတာ ဖြစ်သွားပြီ…
မမထင်တာကတော့ အရာရာ သူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ့ကွယ်။
ကိုခ၊လေးပေါက် နဲ့ မနို ပြောတာ တိုက်ဆိုင်၊လက်ခံ၊ ထောက်ခံပါကြောင်း
မမနှင်း … ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာ အလှအပတစ်ခုတည်းကိုတင်စားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး …. နှလုံးသားကချစ်တယ် … ဦးနှောက်ကနေဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ သူ့အတွက် ထိုသူဆီမှာ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုခုရှိနေလို့ပါ … ဥပမာ …. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သနားလို့ ဆင်းရဲလို့ ဘ၀ကိုကယ်တင်ချင်တဲ့ ယောက်ျားတွေက သူနဲ့ဆိုးတူကောင်းဖက် တိုက်ပွဲဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အဲဒါကလည်း မိန်းကလေးရဲ့ အားနည်းချက်က ထိုယောက်ျားလေးကို ဆွဲဆောင်လိုက်တာပါပဲ ….. ကိုယ့်မှာ သိပ်ချစ်ရတဲ့ သူရှိပါရဲ့နဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ချမ်းသာတဲ့မိန်းမကို ယူလိုက်ရတာလဲ အဲဒီမိန်းမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးလို့ ထင်ပါတယ် ….
ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ ဆိုတာလေးဖတ်မိလို့ ပြုံးရသေး…
မင်ဂါဆောင်တုံးကပုံလေး FB မှာ တင်ထားတာ တွေ့မို့လား…
အရင်က မအိကိုတော့မသိဘူး … အခုဆို အချက်အပြုတ်ကောင်းတာ မအိရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးပေ့ါ …….
ညီမလေးယူဆချက်ကလည်း မှန်ပါတယ်ကွယ်..အဲ့တာ အရာရာ သူ့အကြောင်းနဲ့သူပါ..ဆိုချင်တာ
ကိုယ့်ကိုကြိုက်မဲ့သူရှိတာ,မရှိတာအပထား.. ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ,မရှိတာခဏထား.. အသက်ကြီးလာလေလေ..တကိုယ်ကောင်းစိတ်များလေလေမို့ အပျိုကြီးဖြစ်သွားတာလို့တော့..ကိုယ်တို့သူငယ်ချင်းတွေ ခဏခဏမှတ်ချက်ချမိတယ်..:harr: :harr:
ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှစ်တော်တော်ကြာ တကိုယ်တည်း စိတ်ကြိုက်နေခဲ့တာဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ခွဲဝေမပေးချင်ဘူးလေ.. အဟီး
ဒါပေမဲ့လည်း ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့လေ.. တခါတလေတော့လည်း ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘ၀တစ်ခုတော့ အလိုချင်မိသား..:oops:
ဒါဆို မlinnlinn က အပျိုကြီးပေါ့နော် … ဟဲ ဟဲ အပျိုကြီးတွေ တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပီ ……..
“ဒါကို အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားတွေက
ဆွေးနွေးအကြံပေးရင် ကျွန်မရဲ့အဆိုက မှန်မမှန် အတည်ပြုလို့ရမှာပါ ”
အင်း .. အဲ .. ပေါ့လေ ….
သားသားဂ လူဂျိုလေးဆိုဒေါ့ဂါ ဆွေးနွေး အကျံပေးစရာ မလိုဒေါ့ဘူးနော် ..
လစ်ပီ .. ဝှစ် .. ဝှစ် ..
Khaing Khaing ရေ
ကောင်မလေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လို ယောက်ျားမျိုးရဲ့ ဘေးမှာ ၀င်ပြီးရွေးချယ်ခံတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အပျိုကြီးဖြစ်တာကတော့ Khaing Khaing ပြောသလို ဆွဲဆောင်မှုမရှိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ချူချင်သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ကြားက အပျိုကြီးဖြစ်ရတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်က စိတ်ကြိုက်မတွေ့လို့သော်လည်းကောင်း၊ ချစ်ရမယ့်သူ မတွေ့လို့သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့လူ မပါသေးဘူးဆိုပြီး ရွေးရင်းရွေးရင်းနဲ့သော် လည်းကောင်း၊ ချစ်ရဲ့နဲ့ သတ္တိမရှိလို့သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါက Green Rose ရဲ့အမြင်ပါနော်။ Khaing Khaing ပြောသလိုပဲ ရွာထဲက အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားတွေက ဆွေးနွေးအကြံပေးရင် အဲဒီ့အဆို မှန်မမှန် အတည်ပြုလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အမျိုးသားတွေထဲက မိဘက ပေးစားတာကို သားလိမ်မာလေးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရယ်၊ ရွေးစရာလုံးဝမရှိခဲ့ပဲ ရတာလေးပဲ ယူထားခဲ့ရတဲ့သူတွေရယ်၊ အမျိုးသမီးက ခေါင်းခေါက်ရွေးတာကို ခေါင်းအနာခံပြီး ၀င်တန်းစီခဲ့တဲ့ သူတွေရယ်ကိုတော့ ဖယ်ထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဦးမာဃကျတော့ နတ်သမီး တစ်ဖက် ငါးရာဆိုတော့
သူတို့နဲ့ ဦးမာဃ ဘယ်သူက ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိသလဲဟင်
နတ်သမီး ငါးရာက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
စဉ်းစားကြည့်လေ. အမျိုးသမီး ငါးရာမပြောနဲ့ ငါးယောက်ဆိုရင်တောင် တော်ရုံယောက်ျား ဦးနှောက်ခြောက်ပြီး ရူးသွားနိုင်တယ်။ ဦးမာဃ ကနတ်သမီးငါးရာ ဂဂျီဂဂျောင်ကျတာကိုတောင် မညီးမညူနဲ့ တစ်ယေက် တစ်လေကိုတောင် (အဲ နတ်သမီးဆိုတော့ တစ်ပါးပေါ့နော်) မလျှော့ချဘူးဆိုတော့ … နတ်သမီးတိုင်းမှာ ဦးမာဃ ဒုက္ခခံနိုင်လောက်အောင် ထိုက်တန်တဲ့ စွဲဆောင်မှုတွေ ရှိနေလို့ပေါ့.။
နတ်သမီးက တဖက်ငါးရာဆိုတော့ တစ်ထောင်ပေါ့..
OH.. GOD…. ဦးမာဃ တနေ့တနေ့ နတ်သမီး တစ်ထောင်ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေ ကြားမှာ.. မရူးသေးဘူးလားမသိ..
ကဂျာ..ဆရာမ ကို.ပို စိတ်ဝင်စားတယ် ။
သားအတွက်တော့..ကဂျာဆရာမ / ချာရေးချရာမ ..တို့က..
ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပါတယ် ။
အင်းးးးးးးးးဟိုနေ့က ဂျီးတော်မှာ အမွန်ပြောသလို အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိရင်စောစောယူလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့။
နန်းတော်ရာသူလေးကတော့ အသက်၂၉နှစ်နဲ့ မီးမီးကော၊သားသားပါပြည့်စုံတာကြောင့် သားကြောပါဖြတ်လိုက်ပြီ ကွိ…………..
ဟာ … မိုက်တယ်ကွာ … အားကျစရာဖြစ်ပြန်ပြီ ……… အပျိုထင်လို့ သဘောတွေ ကျိတ်ကျနေတာ ….
နန်းတော်ရာသူလေးကတော့ အသက်၂၇ နှစ်နဲ့ မီးမီးကော၊သားသားပါပြည့်စုံတာကြောင့် သားကြောပါဖြတ်လိုက်ပြီ ကွိ…………..
ကျုပ် ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်စားပြောပေးမယ်
( လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို ကလား ပလာရိုက်သလိုလုပ်ပြီးပြောသည် )
ညီးဒို့ဂ ဆွဲဆောင်မှု့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအေ့ ညုဒါ ညုဒါ
ညီးဒို့ ညုလုံး ဖုလုံး ထုလုံးဒေ လောက်ဂဒေါ့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးဒယ်
တိန် တိန် တိန် (တိန်ပြီးရင်းတိန်)
တကယ်တော့ အဲဒီ ” ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း” ဆိုရာမှာ ကောင်းသော ဆွဲဆောင်မှု နဲ့ မိန်းမ တွေ ရှိသလို မကောင်းသော ဆွဲဆောင်မှု နဲ့ ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ မိန်းမတွေလဲ ရှိပါတယ်။
အပျိုကြီး ဖြစ်ပြီး အဲဒီ အပျိုကြီး အပျိုကြီး လုပ်နေသ၍ စောင့်နေရှာတဲ့ လူပျိုကြီး များ ရှိတာ ပုံပြင်မဟုတ်ပါ။
သူတို့ တွေ သေတဲ့ အထိ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး တွေ အဖြစ်နေသွားပါတယ်။
ဂျေညီညီ သီချင်းလား “အားကျမခံ လူပျိုကြီးဘဲ လုပ်တော့မယ်” ဆိုတာတောင်ရှိသေး။
အဲဒါက ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလို့ပေါ့နော်။
(ကို ကျောက် နဲ့ အမတ်မင်း ကို ထပ်အင်တာဗျူးပါဗျို့)
နောက် ပုံပြင်တစ်ခု က
မိန်းမ ယူပြီး အဲဒီမိန်းမ ထက် မရလိုက်တဲ့ ငယ်ချစ် အပျိုကြီး ကို ဆက်ချစ် နေတာ မိန်းမ က ခွင့်လွှတ်ထားရတဲ့ အဖြစ်။
တကယ်တော့ ဘယ်မိန်းမ မဆို သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ ဆွဲဆောင်အားရှိကြပါတယ်။
တစ်ချို့ တွေ က သူတို့ ရဲ့ Gene (မြန်မာပြန် မိရင် သူကြီး ရဲ့ စကားလုံး မကြွယ်ဝ မှု စွဲချက်မိမှာစိုးလို့ ) မှာ ကိုက တစ်ကိုယ်တည်းနေပြီး မျိုးဆက်မပြန့်ပွါး ချင်တဲ့ DNA ပါနေလို့ လို့ ဆိုတာဘဲ။
မှတ်ချက် – အရီး သည် အပျိုကြီး မဟုတ်ပါ။
ကွန်မန်း များကိုဖတ်ရသည်ကို အလွန်သဘောကျမိကြောင်း
ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမရှိတာနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာ မကျတာတော့ မဆိုင်ဟုထင်ပါသည်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် မိန်မယူရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဟီး .. ဟီး အဲလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး …. ဒါက အပျိုတွေကို အနိုင်ယူချင်လို့ပြောတဲ့သဘောပါ ………
ပို့စ်ကို ကွန်မင့်လေးတွေနဲ့တွဲဖတ်သွားတယ်.. ကိုယ်တိုင်ကတော့ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ဘ၀ကိုပဲ သဘောကျတယ်။ အပြင်သွားရင်တောင်တစ်ယောက်တည်းသွားတယ်။ အဖေါ်ခေါ်ရင် သူများအားနာရတာနဲ့ ဘာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းက ကိုယ့်သဘောပဲ..ဘယ်သူ့ကိုမှ လိုက်ငဲ့၊အားနာနေစရာမလိုဘူးလေ။ အိမ်ထောင် သည်တော်တော်များများကတော့ ဒီလိုပဲနေပြောကြတယ်။ မခိုင်ခိုင် ကတော့ အပျိုးကြီးဖြစ်နေသူတွေကို ကျွတ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ အရမ်းကို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မိသားစုဘ၀ကိုရထားလို့ပဲဖြစ်ရမယ်။
အပျိုကြီးတစ်ယောက်တော့ရပီ …….. အိမ်ထောင်ရှင်ဘ၀မှမဟုတ်ပါဘူး … အပျိုဘ၀မှာပါ ကိုယ့်စိတ်ကို ပျော်ရွှင်အောင်နေနိုင်ရင် ပျော်စရာကောင်းပါတယ် ….
ခုမှပဲ.. ဒေါ်ခိုင်ခိုင် ဖွပေးလိုက်တော့မှ.. ရွာထဲမှာ အပြိုကြီးတွေ
ကျိတ်ပြီး ထားတဲ့ ဒါလင်တွေ ဒါလက်တွေ ဒေါ့တာတွေ ပေါ်ကုန်ပီ..။ ။
အိမ်ထောင်မကျတာ ဆွဲဆောင်မှု မရှိတာချည်းပဲနဲ့ကော
အိမ်ထောင်ကျတိုင်း ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလှရယ်လို့ ကိုရင် မထင်ပါဘူး။ ။
စိတ်ပါ.. အဓိကက စိတ်ပါ။
အပျိုကြီးနာမည်တပ်ပြီး လစ်ဗင်တူဂဲလ်သားတွေ နေကြတဲ့ အပျိုကြီးတွေလည်း
စိတ်စိတ်.. ကိုရင်တို့ မြတ်စွာဘုရားဟောဖူးတယ်.. တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ လူ့စိတ်က
ချွင်းချက်တော့ တို့သင်္ဘောသားကတော် မခိုင်ကတော့ တော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်လို့
ရုံးပိတ်ရက် စနေနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာရယ် … အလုပ်တွေအရမ်းများနေတာကြောင့် ….. နောက်ပိုင်း ကော့မန့်များကို Reply မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး … ညီမပို့စ်ကို အားပေးကြသော ရွာသူ ရွာသား အပေါင်းအားလုံးကို ခင်မင်လေးစားလျှက် ………
အင်း အသက်လေးဆယ်ကျော်တိုင် တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတာ လက်စသပ်တော့ ဆွဲဆောင်မှုမရှိလို့ကိုး….။ လုပ်ကြစမ်းပါဦး ဘယ်မှာသင်တန်းတက်ရမလဲ ဟင်!